Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Bukayo Saka Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Anyị Biography nke Bukayo Saka na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ dịrị, Ndụ, Net Worth na Ndụ nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara “Sakinho“. Ọ na -amalite site na mmalite ya, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na Gunners.
Iji nye gị ụtọ ụdị okike Bukayo Saka's Bio, nke a bụ nchịkọta akụkọ gbasara ndụ ya.
Ndụ na ebili nke Bukayo Saka.
Ee, onye ọ bụla na-ahụ ya dị ka nwa-ahụ ihu na-ele anya winger nwere atụmanya bọọlụ mara mma. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Bukayo Saka nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Bukayo Saka Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Bukayo Saka mụrụ na Xbọchị 5 nke Septemba 2001 nye ndị nne na nna nọ n'obodo London, United Kingdom. Ndị mụrụ ya bụ ụmụ amaala Naịjirịa bụ ndị buuru ụzọ pụta tupu ha ebie Nigeria ka ha biri na London na-achọ ibi ndụ ka mma na ohere karịa maka ụmụ ha amụbeghị.
Mgbe a mụrụ ya, nne na nna ya kpọrọ ya “Bukayo”Nke bu aha unisex nke putara“Na-agbakwunye na obi ụtọ ”. Bukayo bụ aha a na-ejikarị ya Nke ndi ebo nke southwest Nigeria. Nke a pụtara na Busayo Saka nwere ezinụlọ sitere na agbụrụ ndị Yoruba nke Nigeria.
Saka tolitere na UK isi obodo London nke dị n'ezigbo ụlọ nke ọkara. Nna ya na nne ya dị ka ọtụtụ ndị Naijirịa kwabata enweghị agụmakwụkwọ ego kacha mma mana ọ na -arụ ọrụ dị ala yana ọtụtụ oge ọ na -esiri ego ike iji lekọta mkpa ezinụlọ ya na UK na azụ na Naịjirịa.
Bukayo Saka Biography - Mmụta & Nrụpụta Ọrụ:
Dịka ọtụtụ ndị Naịjirịa nọ na London, ndị ezinụlọ Bukayo Saka nwere mmasị na football.
Ọ bụ ịhụnanya ha nwere maka egwuregwu bọọlụ na agụụ na -adịghị agwụ agwụ iji bulie ụdị ndụ ha nke mere ka Bukayo nwee agụmakwụkwọ football na London.
HNdị nne na nna hụrụ football n'anya na-akwado Arsenal, ọ bụ ihe dị mma maka Bukayo na-eto eto itinye uche ya na ime ya na klọb klọb.
Ọ bụ nna Bukayo Saka bụ onye were naanị ọrụ ịhụ na nwa ya nwoke nwere obi ike na ịdị umeala n'obi n'ọchịchọ ya iji nweta nnwale ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na -aga nke ọma. N'okwu Bukayo;
'Papa m bụ nnukwu mmụọ nsọ nye m. Site n'oge m bụ nwata, ọ na-eme ka m dabere mgbe niile '
Ngwa maka agụmakwụkwọ football Arsenal dị naanị maka ụmụ akwụkwọ nwere nkà n'ezie. N'ihi na nne na nna ya maara na Bukayo nwere ihe ọ ga -ewe, ha alaghị azụ itinye akwụkwọ.
Obi dị m ụtọ na agụmakwụkwọ Arsenal kpọrọ ya wee gosipụta na ya bara uru, na -agafe ule ha. N'oge a, mpako nke nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya amaghị oke.
Bukayo Saka Nwatakiri Akụkọ - Ndụ Ndụ Mmalite:
Saka malitere ọrụ ya ArsenalUlo akwukwo nke Hale End adighi nfe ka o juputara na otutu onyinye sitere na ya na nne na nna ya. N'okwu ya;
"Ọ bụụrụ ndị mụrụ m ezigbo mgba inyere m aka ịbata ebe a mana ha nyere ihe niile ha nwere wee kpọọ m ọzụzụ"
Ọgụ a nyere Saka ọtụtụ mkpali nke nyeere ya aka ịrụsi ọrụ ike oge niile wee gbaa mbọ hụ na o nyere ihe kacha mma. Dịka ndị otu egwuregwu ya, Saka tọrọ arụsị.
Mgbe ndị ọzọ so Thierry Henry, Dennis Bergkamp, wdg, ọ họọrọ onye bụbu onye Sweden na Arsenal, Freddie Ljungberg bụ onye bụbu onye ntorobịa na klọb.
Freddie Ljungberg nyeere Bukayo Saka aka ịbụ ihe ọ bụ taa.
Dị ka onye egwuregwu agụmakwụkwọ U15, Freddie Ljungberg nyere Bukayo Saka ndụmọdụ kacha mma. O nyeere Saka aka ịdị umeala n'obi ma rụsie ọrụ ike dịka o kwenyere na obere nwa ahụ agaghị adị ka onye ọkpụkpọ kacha elu.
Bukayo Saka Biography - Ụzọ ama ama akụkọ:
Ihe niile Freddie Ljungberg buru n’amụma gbasara ya mezuru. Ka Saka gbara afọ iri na asaa, ndị Arsenal nyere ya nkwekọrịta ọkachamara wee bulie ya n'okpuru ndị 17. Ọzọkwa, mgbe ọtụtụ arụmọrụ dị egwu gasịrị, a kpọkwara Saka n'ime ndị otu klọb.
Mgbe ya na ndị otu egwuregwu, ọ malitere ịchọ ohere n'egwuregwu asọmpi iji gbanye ọrụ ya na ịlụ ọgụ megide asọmpi.
N'ikwu maka asọmpi, ịchụpụ Alex Iwobi na Aaron Ramsey bụ ihe ịma aka dị ukwuu karịa onye òtù ọlụlụ ibe ya Reiss Nelson.
Oge mgbanwe a na-atụ anya ya nke mbụ bịara na 2018/2019 Europa League ebe Saka buru ụzọ hapụ akara ya na arụmọrụ dị egwu.
Bukayo Saka Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Ọgwụgwụ oge 2018 / 2019 hụrụ abụọ Aaron Ramsey na Alex Iwobi na -ahapụ Arsenal gaa Juve na Everton n'otu n'otu.
Nke a nyere Bukayo ohere ime asọmpi pere mpe, ebe naanị otu onye n'ime ndị otu ya ga-asọ mpi maka ọkwa aka ekpe.
Na 19 Septemba 2019 hụrụ Bukayo Saka nwere oke na asọmpi dị n'etiti ya na Reiss Nelson.
Ị maara?… N'ụbọchị ahụ, ọ bụghị naanị akara, o nyekwara ọmarịcha enyemaka abụọ dịka Arsenal meriri 3-0 megide Eintracht Frankfurt na egwuregwu mmeghe mbụ ha nke 2019-20 UEFA Europa League. N'okpuru ebe a bụ otu ihe ngosi vidiyo.
Mgbe Bukayo Saka mezuru nrọ nwata ya nke ị nweta ihe mgbaru ọsọ Arsenal mbụ, ọ nyere nna ya ngwa ngwa FaceTime oku.
"Enweghị m ike ịgwa ya okwu n'ihi na ndị nkụzi chọrọ ka m banye na ice saa iji gbakee ngwa ngwa mgbe egwuregwu ahụ gasịrị. Anyị na-etinye isi mkpịsị aka anyị n’elu ibe anyị" O kwuru.
Kama ịnwe nkwalite mmalite, aka ekpe nwere ike site na ume gaa ike.
At Afọ 18 na 125 ụbọchị ochie, Saka ghọrọ ọdụdụ nwa agbọghọ Arsenal nke agba bọọlụ na Premier League akụkọ ihe mere eme iji malite nsogbu Man Utd na Arsenal. Ọ tụrụ ndị fans n'anya na egwuregwu ahụ site n'ịchụpụ Ashley Young.
Dị ka n'oge edere, ọtụtụ ndị fans na-ahụ Bukayo Saka dị ka nkwa mara mma ọzọ na-esote ọgbọ nkuzi nke Arsenal mgbe Freddie Ljungberg gasịrị. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Bukayo Saka's Girlfriend?
Maka inwe ihe ịga nke ọma na ibili na nnukwu ihe egwuregwu bọọlụ Bekee chọrọ, o doro anya na ọtụtụ ndị egwu ga -ajụrịrị ma Bukayo Saka nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye.
Ee! ọmarịcha ihu nwa ya na ụdị egwuregwu ya ga-eme ka ọ dị elu maka enyi nwoke nwa agbọghọ.
Ajuju n'ime enyi nwanyi Bukayo Saka.
Mgbe ọtụtụ nyocha gasịrị, Ọ na-egosi na Bukayo Saka enweghị otu (n'oge edere). Anyị maara na n'ihi ụdị mgbaghara mgbaghara football nke Bekee dị elu, ọ ga-abụrịrị na Saka lekwasịrị anya na ọrụ ya kama ịchọ enyi nwanyị ma ọ bụ onye ga-abụ nwunye ya.
N'oge a, anyị nwere ike ịsị na Saka etinyela ezigbo mbọ iji zere ihe ọ bụla na ndụ nzuzo.
Eziokwu a na-eme ka o siere ndị na-ede blọgụ dị ka anyị aka ozi banyere ndụ ịhụnanya ya na akụkọ mgbe ochie. Agbanyeghị, ọ ka nwere ike nwee enyi nwanyị mana ọ họọrọ karịa ime ya ka ọhaneze, opekata mpe ugbu a.
Bukayo Saka Ndụ Nke Onwe:
Bumata Bukayo Saka Eziokwu Ndụ Nkeonwe ga - enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ na agwakọghị ya na ihe gbasara football.
Bukayo Saka Personal Life Eziokwu.
Inweta izute ya, ị ga -achọpụta na ndụ Bukayo Saka na -etinye usoro ụzọ maka ibi ndụ ahaziri ahazi.
Ọzọkwa, ọ bụ onye nwere omume enyi na onye dị ala nke na-emeghere ndị fan ọtụtụ. Mgbe ọ na -azụ ọzụzụ, ọ na -elebara obere nkọwa anya wee hụ na ọ nweghị ihe fọdụrụ na ohere.
Laa azụ na Nigeria na ọbụna na United Kingdom, ndị enyi na ndị obodo Bukayo Saka na-ahụ ya dị ka akụ mba nke ekwesịrị ichebe n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Lee vidiyo dị n'okpuru.
Ndụ ezinụlọ Bukayo Saka:
Bukayo Saka nwere obi uto banyere agbụrụ ọmụmụ ya na agbụrụ Nigeria ma n'oge ọma ma n'oge ọjọọ. Dị ka onye na-eri nri, obi dị ya ụtọ na ya emeela ụzọ nke ezinụlọ ya maka nnwere onwe ego niile ekele FOOTBALL.
Bukayo Saka Ndị òtù ezinụlọ na ndị ikwu; nne ya, nna ya, ụmụnne ya ndị nwoke, nwanne nna ya, nwanne nna ya na ndị ọzọ, na-erite uru ugbu a na-enwe nke onwe ha na isi okwu nke egwuregwu bekee.
N'oge ahụ, aOnye ezi na ulo ya na ndi ikwu ya nwere ihe niile mere mkpebi siri ike ịghara ịchọpụta ihu ọha n'agbanyeghị ọtụtụ ụzọ iji jikọta na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Omume dị n'ọhịa na ihe ụtọ dị na ya bụ ụwa abụọ dị iche iche maka Bukayo Saka n'ihe gbasara ụdị ndụ ya.
Ọ bụ ezie na ọ kwenyere ime Ego dị na bọọlụ dị mkpa, mana nkwenye siri ike enyerela ya aka idozi ego ya na ịhazi ya.
Dị ka n'oge ederede, a naghị ekwe ka Bukayo Saka bie ụdị ndụ ọfụma nke aka ya jupụtara n'ụgbọ ala mara mma dị oke ọnụ, nnukwu ụlọ wdg.
Bukayo Saka Ndụ- Ọ bụ ọgwụ mgbochi maka ibi ndụ dị oke ọnụ
N'ime ụwa bọọlụ ọgbara ọhụrụ nke ụgbọ ala ọkụ na ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi na -egosi akụ na ụba na ụdị ndụ dị oke ọnụ, anyị nwere ike ịsị na Bukayo Saka bụ ihe na -enye ume ọhụrụ iji bie ndụ buru ibu.
Bukayo Saka Eziokwu Eziokwu:
Ọ bụghị naanị ya bụ ndị Naijiria nọ n'ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ: Arsenal FC Academy na -aghọ ụlọ nke ọtụtụ ndị egwuregwu sitere na ala Nigeria.
N'oge na -adịbeghị anya site n'oge edere, ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ nyere onyinye mmụta maka onyinye anọ na -ekwe nkwa nwere mgbọrọgwụ Nigeria - Site n'aka ekpe gaa n'aka nri gụnyere Arthur Okonkwo, Armstrong Okoflex, James Olayinka, na Xavier Amaechi.
Ndị ọzọ Nigeria Stars na Academy.
Religion: Dị ka a hụrụ n'okpuru, ihe ntinye ya na Instagram na-agụ “Nwa Chineke”Na ihe ederede a yiri nke onye otu ya Joe Willock. Maka anyị, enwere nnukwu ohere na okpukpe Bukayo Saka bụ Iso Christianityzọ Kraịst.
Okpukpe Bukayo Saka- kọwara.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị Bukayo Saka gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
N'Africa, nwatakịrị nwoke nke Bukayo ekweghị ka ya dinaa nwa agbọghọ.
Ọ dị mma ịgụ, ihe ọmụma na-atọ ụtọ. Na paragraf "Mgbe a mụrụ ya" ị dere aha ya na-ezighi ezi - Busayo kama Bukayo?